Xubnaha jaaliyadda ayaa nadiifinaya kadib habeennimadii rabshadaha sokeeye ee Minneapolis. Sumcada sawirka: Josh Hild on Unsplash
Xaafadda Powderhorn ee koonfurta Minneapolis waxay ii ahayd meel magan ah afartii sano ee la soo dhaafay. Dadka, dareenka bulshada, geedaha dhaadheer, farshaxanka, iyo meheradaha yar -yar ee aan xadka lahayn ayaa Powderhorn ka dhigay meel ka badan. Xaafaddu waxay leedahay dareen wadareed oo jidhkayga dhex mara oo i dareensiiya sidii inaan ku xidhnaa wax ka weyn, wax macno badan leh.
May 25, 2020. Maalin caddaalad darro. Maalin xanuun. Iyada oo bulshada ku nool Powderhorn (iyo ugu dambayntii adduunka) ay ka baaraandegayeen mowjado mowjado shucuur ah oo uu keenay dilkii George Floyd, mala -awaalku wuxuu bilaabay inuu qulqulo. Sheekooyinka waxaa laga farsameeyay waxa jiray, waxa jira, iyo waxa ay noqon doonaan. Dadku waxay bilaabeen inay ku soo degaan xaafaddan iyagoo rajaynaya inay qabsadaan nuxurka xilligan, haddana waxaan ka helay runta wax yar oo la sheegayo. Inta badan waxa aan ku arkay TV -ga, wararka, ama kuwa ka baxsan Minneapolis waxay ku dhisnaayeen cabsi iyo mala awaal, halkii ay ka ahaan lahayd goob xiiso iyo daryeel. Hoos waxaan kula wadaagayaa xoogaa milicsiga kakan wixii aan arkay: quus iyo rajo; cabsi iyo geesinimo; hubin la'aan iyo ficil.
Quusta iyo Rajada
26 -kii Maajo, waxaan socod gaaban ku maray isgoyska halkaas oo lagu dilay George Floyd, iyadoo laga qaaday awooddii neefsashada in ka badan sagaal daqiiqo. Waxaa soo xaadiray kumannaan qof, oo xirnaa maaskaro oo aan hubin waxa la sameynayo marka laga reebo in meel la wadaago oo la murugoodo. Hawada ayaa culus. Waan ognahay in masiibadani ay si aan kala go ’lahayn ugu xidhnayd waayihiisii dhibaataysan ee waddan ahaan. Waxaan arkay ilmo, habsi, iyo cadho, waxaanan maqlay oohin murugo leh. Markii dadkii badnaa ay si tartiib tartiib ah u bilaabeen socod iyo qabanqaabiyaha ayaa qabsaday makarafoon, waxaa jiray daqiiqad markii niyadda ay u gudubtay rajo. Waxaan rajaynayaa inaysan taasi mar kale dhici doonin. Waxaan rajaynaynaa in codadkeena iyo ficilkayaga wadajirka ahi ay joojin karaan taariikhdan soo noqnoqotay mar iyo dhammaan.
Dad badan ayaa isugu soo baxay fagaaraha George Floyd. Sumcada sawirka: REUTERS/Eric Miller
Cabsi iyo Geesinimo
Toddobaadyadii ka dambeeyay dilka, aragtidayda waqtiga iyo xaqiiqdu waxay bilaabatay inay dunto. Goobo ganacsi iyo dhismayaal ayaa lagu gubay Lake Lake. Markaan soo jeedo habeennimadii, waxaan uriyay qashinka qiiqaya ee gurigayga ka muuqda oo aan arkayay iftiinka dabka ee ka imanaya qolkayga hurdada. Warbaahinta gees kasta oo adduunka ah ayaa timid Powderhorn, iyagoo isku dayaya inay si sax ah u ogaadaan waxa dhacaya. Ciidanka Qaranka ayaa la hawlgeliyay waxaana la hirgaliyay bandow. Hadal baahinta fidiyayaal caddaan ah oo weerar ku haya xaafadda iyo magaalada.
Cabsi ayaa jirtay. Qaar ka mid ah deriska ayaa cararay. Qaar baa hub qabsaday. Cabsidu waxay u ekayd ceeryaamo aan la arki karin oo si tartiib ah u soo gashay. Waxaan xusuustaa isu soo bax nabdoon oo dadweyne oo ka dhacay Powderhorn Park, halkaas oo cabsidani ay u muuqatay mid geesinimo leh. Hoggaamiyayaasha bulshada ayaa aqoonsaday qorshayaasha: la xiriir deriskaaga; waraabi cawskaaga; ilaali deriska; ogow goorta la baxayo. Bulshadu waxay si maldahan u xireen gacmaha waxayna doorteen geesinimo, maxaa yeelay sida dad badan oo cadaalad -darradu hore waxyeello u geysatay, ma haysanno wax aan kala dooran karno.
"Bulshadu waxay si maldahan u xireen gacmaha waxayna doorteen geesinimo, maxaa yeelay sida kuwa kale oo badan oo ay waxyeello ka soo gaartay caddaalad -darrada waagii hore, ma haysanno dooq." - TIM MURPHY
Hubaal la’aan iyo Ficil
Markii dabka la damiyay oo xubnaha bulshadu ay heleen waqti ay ku qiimeeyaan khasaaraha, waxaa la dareemay xoogaa hakad ah. Kuwo badan ma garanayn waxay sameeyaan, meesha ay gargaar ka gaaraan, ama sida loo dareemo. Jawaabtii, qaar badan oo ka mid ah deriskaygu waxay sameeyeen waxa kaliya ee aan kari karno waqtigaas - soo qaad farabadan rakooyin, xaaqin, qasacadaha qashinka, iyo qalab kale oo dayactir ah, oo u sii gudba dhinaca Lake Street. Waxa aan helnay waxay ahaayeen wax la yaab leh - dadku waxay u dhaqaaqayaan ficil, ma sugin waxbarid ama jihayn.
Joan Baez ayaa mar yiri, "Ficilku waa dawada quusta." Bulshadeenu waxay si buuxda u soo dhoweysay ereyadaas toddobaadyada soo socda. Xataa marka ay ku jirto masiibo weyn, waxaan arki karnaa quruxda Powderhorn iyo dadkeeda.
Sannadkan la soo dhaafay wuxuu ahaa mid kakan oo is burinaya — deriskeenna iyo qarankeenna. Aniga ahaan, waxay i xusuusineysaa waxa ay tahay inaan sameyno si aan ugu noolaanno himilada McKnight, si hore u sii mariyaan caddaalad, hal -abuur, iyo mustaqbal badan oo ay dadka iyo meeraha ku horumaraan. Annaga iyo bulshooyinkeenna, waxaan isku duubnaan karnaa kakanaanta iyo sahaminta iska horimaadka. Waxaan dhegeysan karnaa kuwa ugu dhow dhibaatada iyo arrinta. Waana inaannaan marnaba raadin runta si gooni ah. Haddii aan taas u hawlgalno, waxaan u dhaqaaqi karnaa faham qoto dheer, xalal waara, iyo ugu dambayntii dhisme bulsheed oo xoog badan oo noo saamaxaya inaan horumarno jiilalka soo socda.